Fitsipika hanohanana ny fitantanana maharitra | Fiaretana haran-dranomasina
Ny tontolon'ny morontsiraka sy ny ranomasina dia mety matetika manana firafitry ny fananana hafa noho ny tany ary amin'ny firenena maro, dia heverina ho loharanom-bahoaka na iaraha-manana. Raha tsy misy ny fitsipika, ny tontolo iainana an-dranomasina dia mety iharan'ny fahasimbana avy amin'ny hetsiky ny olombelona tsy maharitra, toy ny fanjonoana tafahoatra na fiompiana anaty rano tsy maharitra. Noho izany, ny governemanta dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiantohana ny fitantanana ny fiompiana anaty rano amin'ny fomba izay hampihena ny fiantraikany ary hivoatra amin'ny fomba mahasoa ny vondrom-piarahamonina.
Mba hanehoana ny fitomboan'ny fiompiana anaty akondro haingana eran'izao tontolo izao sy ny filàna torolàlana iraisam-pirenena momba ny fomba fitantanana ny sehatry ny fiompiana anaty rano, tamin'ny 1995 dia namoaka ny fitsipi-pitondran-tena momba ny jono misahana ny sakafo sy ny fambolena (FAO) ny Firenena Mikambana, izay manana torolàlana manokana ho an'ny firenena rehefa mampandroso ny sehatry ny fiompiana anaty rano izy ireo. Amin'ny ankapobeny, ny FAO dia mamporisika ireo firenena mba:
"Mametraha, mitazona, ary mamolavola rafitra ara-dalàna sy ara-pitantanana sahaza izay manamora ny fivelarana ny fiompiana anaty fiompiana tompon'andraikitra" manerana ny faritra efatra lehibe hahazoana antoka:
fahasalaman'ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana
fiarovana ara-tsakafo sy fahasalamana ny vokatra novokarin'ny fiompiana anaty akondro
fahasalaman'ny zavamananaina kolontsaina
ny sehatra dia novolavolaina tamin'ny fomba mahasoa ny vondrom-piarahamonina sy ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny, ary tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny mpampiasa ranomasina hafa
Sehatra saro-pantarina ny fiompiana anaty rano, mitaky fahaiza-manao amin'ny sehatra maro, ao anatin'izany ny ekolojia an-dranomasina, ny fambolena / fiompiana, ny fitantanana ny jono, ny fitantanana effluent ary ny hydrologie, ny fomba fiompy, ny zava-mahadomelina, ny fitaterana an-dranomasina, ny fiarovana ara-tsakafo sy ny sakafo ary ny toekarena. Araka izany, masoivoho maromaro misahana ny fitantanana izay manana fahaizana manokana amin'ireto faritra ireto matetika dia mitana andraikitra amin'ny fandaminana ny fiompiana anaty rano. Na dia maro aza ny karazana fahaizana ilaina amin'ny fitantanana mahomby ny fiompiana anaty akondro, ny rafitra ankapobeny momba ny lalàna sy ny lalàna dia tokony ho feno, mandrindra ary mahomby.
Any amin'ny firenena maro, ny fambolena ny fiompiana anaty rano dia nanaraka ny fivoaran'ny sehatra hafa toy ny jono na ny fambolena. Noho izany, ny fahefana mifehy voalohany amin'ny fiompiana an-dranomasina dia matetika ny maso misahana ny jono an-dranomasina na masoivohon'ny fambolena. Amin'ny fampiasana an'i Etazonia ho ohatra, ny fiompiana anaty rano dia fehezin'ny maso ivoho federaly manaraka:
Ny fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina (FDA) - Ivotoerana ho an'ny fitsaboana biby sy ivon-toerana ho an'ny fiarovana ara-tsakafo sy ny sakafo mahavelona Fiantohana ny fiarovana ny sakafo sy ny fampiasana zava-mahadomelina tompon'andraikitra amin'ny biby
Departemantan'ny fambolena (USDA) Fahasalaman'ny biby - fisorohana, fitadiavana, fifehezana na famongorana ny aretina amin'ny biby fiompy; Fenitra famahanana biby
Agence miaro ny tontolo iainana (EPA) Miantoka ny fenitry ny kalitaon'ny rano
Fitantanan-dranomasina nasionaly sy ny atmosfera (NOAA) Fanombanana ny fiatraikany amin'ireo biby mampinono an-dranomasina; Fiarovana ireo hazandrano tandindomin-doza, toeram-ponenana ary tahiry trondro dia
US Engine Corps of Engineers (USACE) Fanombanana ny loza mety hitranga amin'ny fitetezana; Ny fiantohana ny fenitra momba ny kalitaon'ny rano
Serivisy trondro sy bibidia (FWS) Fiarovana ny karazana tandindonin-doza; mifehy ny varotra bibidia mifanaraka amin'ny lalàna federaly, fanjakana, ary eo an-toerana
Any amin'ny ankamaroan'ny firenena, matetika dia misy "sosona" governemanta maromaro izay mitana andraikitra amin'ny famolavolana ny fiompiana anaty rano, anisan'izany ny firenena (ohatra, federaly), governemanta isam-paritany / fanjakana, ary governemanta eo an-toerana. Ny governemanta nasionaly amin'ny ankapobeny dia mamolavola lalàna sy politika momba ny tontolo iainana manerana ny firenena, lalàna momba ny jono, miantoka ny rano fitetezana tsy ho voasakantsakana ary mifehy ny fari-piainan'ny biby anaty rano sy ny fikajiana fiarovana ara-tsakafo izay tokony harahin'ireo fiompiana akondro.
Ny faritany / fanjakana sy ny fanjakana eo an-toerana dia mety hamaritra amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny toerana sy ny fomba azo ampiharana ny fiompiana anaty rano eo amin'ny faritra iadidiany. Ny fahazoan-dàlana dia azo omena avy amin'ny governemanta nasionaly, fanjakana / faritany, na eo an-toerana na amin'ny ambaratonga maro. Na dia azo fehezina matetika amin'ny faritany / fanjakana na eo an-toerana ny fambolena amoron-dranomasina na ny morontsiraka sy ny fiompiana ahidrano, dia mety ho mahazatra ny faritry ny fiompiana anaty akondro mba hianjera amin'ny fahefan'ny governemanta nasionaly.
Ny governemanta dia mety manana na tsy manana lalàna manokana momba ny fiompiana anaty rano sy fitsipika mifandraika amin'izany, ary matetika miantehitra amin'ny lalàna hafa izay misy andiam-pahalalana bebe kokoa momba ny tontolo iainana, ny fahasalaman'ny biby na ny fiarovana ny sakafo. Fanontaniana vitsivitsy apetraka amin'ny famaritana ny rafitra mifehy ny mety ho tetik'asa momba ny fiompiana anaty rano:
Vondrona na vondrona nasionaly sy eo an-toerana inona no mifehy ny fiompiana anaty rano?
Misy lalàna, politika na fitsipika manome torolàlana na takiana amin'ny tontolo iainana ve?
Misy ve ny lalàna, ny politika, na ny lalàna mifehy ny fahasalaman'ny biby sy ny fiarovana ny sakafo?
Inona ireo lesoka ao amin'ireo rafitra mifehy ny lalàna-misy?
Ao amin'ny fizarana roa manaraka - Fanombanana ny fiantraikan'ny tontolo iainana ho an'ny asa anaty akondro ary Fanakaikezana ny fitantanana ny faritra sy ny fisafidianana ny tranokala - hijerena ireo fomba fitantanana roa tena ilaina izahay izay ampiasaina matetika eran'izao tontolo izao mba hampirisihana ny fampandrosoana maharitra ny fiompiana anaty rano.